Ukuvuselela ukuvala i-Coronavirus covid-19: Uma uvuka futhi uqaphela ukuthi ubanjwe, yini ongayenza?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-24 March 2020	• 16 Amazwana
Lapho unyaka ka-2020 uqala ngizwa ukuthi kuzoba unyaka onzima. Ukubona iminyakazo yokugcina ebheke ekuvaleni okugcwele kwe-coronavirus covid-19 manje kunikeza ithemba elithile lokuthi kuzophela maduze. Ngobusuku bonyaka omusha, ngabhala: “Ngokwazi kwami, unyaka ka-2020 kuzoba unyaka wabadlwenguli kanye ne-hypersonic […]
Uyacelwa uqaphele: Idokhumenti yeCovid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) isicupho sezindaba ezingamanga
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-23 March 2020	• 9 Amazwana
I-Covid-19 Janet Ossebaard (iziyingi zezitshalo, i-Ninefornews) i-coronavirus documentary (bheka ngezansi) yisicupho. Kufanele wazi ukuthi i-IBM's Deep Blue supercomputer yanqoba kumpetha womhlaba uKasparov nge-chess ngonyaka we-1996 kwathi i-Google Alphabet's Computerum yashaya umpetha womhlaba lomdlalo oyinkimbinkimbi kakhulu Go ngo-2016. Ngaphezu kwalokho, kufanele wazi ukuthi […]
I-Bill Gates 'quantum dots' ikhadi le-ID engenantambo eligcina ukuthi une-coronavirus nokuthi ingabe ugonyelwe
Ngesikhathi seReddit 'buza ukuthi ufunani', uBill Gates wabuzwa umbuzo mayelana nobhubhane lwe-covid-19 coronavirus. Impendulo yakhe yayiveza. Uthe, "Ekugcineni, sizoba nezitifiketi ezidijithali ukukhombisa ukuthi ngubani osanda kulungiswa noma wahlolwa nokuthi ngubani othole umuthi wokugoma." Ngalezo zitifiketi ezidijithali, uBill anga […]
ICoronavirus, umphakathi olukhuni noma ozuza ubuntu?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-23 March 2020	• 10 Amazwana
I-coronavirus ngokusobala iletha ukuqina okukhulu emphakathini. Ungabona ukuthi kukho konke ukuhlaselwa kwabezindaba zenhlalo kuye wonke umuntu onesibindi sokuveza umbono ohlukile. Ungenzi iphutha. Eminyakeni engaphezu kwengu-7 engibhalile, ngithole ukuthi inani lamasosha ezakhamuzi afaka izinhlamvu zawo zekhibhodi kubantu abezindaba zokuxhumana […]
Lapho kufika isivalo se-coronavirus isiyonke nokuthi ibukeka kanjani: izikhala zokuhlola nebutho
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-21 March 2020	• 25 Amazwana
Singalinda ukuvala okuphelele eNetherlands. Izinkulumo ezenziwa nguRutte neNkosi uWillem Alexander ziyizimpawu odongeni futhi ikakhulukazi zisebenzela ukujabulisa abantu futhi zinikeze umbono wokuthi konke kuzolunga. "Kungathatha isikhashana nje", ngakho-ke […]
Funda okufanele ukwenze nokuthi yini okufanele ukwenze kufaka ukuvala okulandelayo kwe-coronavirus
ahanjiswe INCWADI YOKWENGEZA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-20 March 2020	• 19 Amazwana
IMeya yase-Amsterdam u-Femke Halsema uveze izolo ukuthi ukuvalwa ngokuphelele kwe-Amsterdam ngeke kusimangaze. NgoMashi 18, abakwaDe Telegraaf babike ukuthi amaphoyisa asevele elungiselela ukuvalwa ngokuphelele. Umbiko we-Telegraaf izolo kusihlwa wokuthi ubhubhane lomkhuhlane ubuyile futhi uthi inkinga manje […]
Emangalisa Insights kuCoronavirus Panic kaDkt. Wolfgang Wodarg?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-19 March 2020	• 6 Amazwana
UWolfgang Wodarg udokotela waseJalimane nosopolitiki be-SPD. Njengosihlalo woMkhandlu WePhalamende weKomidi Lezempilo loMkhandlu WaseYurophu, uWodarg wasayina isinqumo esihlongozwayo ngoDisemba 18, 2009, okwadingidwa ngaso isikhashana empikiswaneni yezimo eziphuthumayo ngoJanuwari 2010. Ubuye wacela ukuthi kuphenywe ngethonya elisolwa ngokungemthetho le […]
Ungabhekana kanjani nezinyathelo ze-coronavirus (ukukhiya): izeluleko ezisebenzayo
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-18 March 2020	• 18 Amazwana
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngibe nginezikhukhula ngemibuzo ngokuqubuka kwe-coronavirus. Yini okufanele ngiyenze? Ngibhekana kanjani nazo zonke izindlela? Imaphi amalungiselelo engiwenzayo ukuze konke kuza? Nginezindaba ezinhle. Izindaba ezimnandi ukuthi kuyacaca ukuthi abantu abaningi bayaqonda ukuthi kuyadlalwa […]
UNgqongqoshe uBijleveld umbutho ulungele “izindawo zokuboshwa” ezingeziwe kanye nokugcina ukuthula kuzinhlekelele ze-coronavirus, buyekeza: amaphakethe okusekela amashumi ezigidigidi
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-17 March 2020	• 17 Amazwana
UNgqongqoshe u-Ank Bijleveld usanda kubika ukuthi uMnyango Wezokuvikela (ozwakala ungcono kune-'butho ') usekulungele ukusungula izindawo zokwamukela abantu, izibhedlela eziphuthumayo kanye nezindawo ezihlala zodwa zabantu kanye nokugcina ukuhleleka. Akudingeki ukuthi ungibize nge-clairvoyant, ngoba kungenzeka ukuthi ubikezele lokhu futhi, kodwa konke kuyeza futhi […]
"Nakani kancane komunye nomunye", ukungatheleleki kweqembu, uhlelo lokusebenza le-coronavirus OLVG nokuthi ungamisa kanjani lokhu kuhlanya?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-17 March 2020	• 11 Amazwana
"Qaphelisanani kakhulu" yi-mantra entsha esiyibone iqaliswe nguMark Rutte & Co we-politburo emahoreni angama-24 edlule. Ukuthi "lalelanani kancane" kusongelwe kahle futhi kuzwakala kumnandi kakhulu, kungathi niyabizelwa ukunakekela omunye nomunye, kepha-ke igama elithi mantra […]
«Ikhasi langaphambilini - Ikhasi elilandelayo »
Joyina i-BATTLE bese ukhetha LAPHA
> Ukuvakasha Okuphelele: 16.768.413
IZIVIVINYO PER 18 FEB 2020
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.344.665
ICoronavirus: avelaphi amagciwane futhi aphindeka kanjani futhi ahamba kanjani?
Indlela ephumelela kunazo zonke yokulwa ne-coronavirus ivela eChina (ividiyo)
Inkinga yeCorona: lokhu sekuphelile nini futhi kufanele senzeni manje?
Ukuwa kwe-cabal 'okungenangqondo futhi bangobani' Q Anon 'Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
IGermany isebenza ngohlelo lokusebenza lwe-coronavirus eligcina ithrekhi yokuthi ngubani oxhumana naye
Harry qhwa op ICoronavirus: avelaphi amagciwane futhi aphindeka kanjani futhi ahamba kanjani?
UMartin Vrijland op ICoronavirus: avelaphi amagciwane futhi aphindeka kanjani futhi ahamba kanjani?
UMartin Vrijland op Ukuwa kwe-cabal 'okungenangqondo futhi bangobani' Q Anon 'Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Le popup izovala ngo:
Ngabe usuqedile incwadi yakho futhi ungathanda eminye imininingwane?